पूर्वयुवराज पारस ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा ! — Newskoseli
पूर्वयुवराज पारस ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा !
थापाथलीमा ड्युटी गरिरहेका दुई–तीन ट्राफिक प्रहरी गाडी रोक्ने आदेश दिएर उक्त गाडीको नजिकै पुगेपछि बिस्तारै गाडीको सिसा झार्दै चालक बोले– ‘ह्वाट ह्यापेन्ड ?’
ट्राफिक प्रहरीले कागजपत्र मागे, सहजै उपलब्ध गराए चालकले । एक ट्राफिकले भने– ‘गाडीको नम्बर पनि स्पष्ट देखिँदैन त !’ गाडीबाट चालक ओर्लिएर नम्बर प्लेटमा लागेको माटो टालोले पुछपाछ गरे ।
गाडीबाट चालक तल झर्ने वित्तिकै जाममा परेका मोटरसाइलकमा सवारहरु चिच्याए– ‘पारस शाह ।’ त्यसपछि त सडकमा हल्लीखल्ली नै भयो । जाउलाखेल चोकबाटै प्रहरीले निगरानीमा राखेका ती चालक पूर्वयुवराज पारस शाह थिए । गाडीमा उनी एक्लै थिए ।
तीव्र गतिमा पारसले चलाएको बा. १४ प २१३१ नम्बरको गाडी प्रहरीले समातेको हो । जाउलाखेलदेखि हुँइकिएका उनलाई सोमबार थापाथलीमा जाउलाखेल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ट्राफिकले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि फिर्ता माग्दा नदिएकाले पारसले आक्रोशित हुँदै– ‘तैंले मलाई चिन्नुपर्छ’ भने पनि ट्राफिक प्रहरीले दिएन ।
लाइसेन्स र ब्लुबुक ट्राफिकलाई छाडेर हिँडेको केही समयपछि उनका अंगरक्षक थापाथली ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । पारसले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर रसिद काटेको थियो । रसिदमा चालक र धनीको नाम पारस वि.वि. शाह उल्लेख छ ।
अंगरक्षकले बैंकमा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर पारसको ब्लुबुक तथा लाइसेन्स फिर्ता लगेको छ । ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने पारस शाह ट्राफिकको फन्दामा परेको खबर बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।